Ahlu-Sunna oo keentay xujo cusub oo ku saabsan magaca maamulka gobollada dhexe +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ahlu-Sunna oo keentay xujo cusub oo ku saabsan magaca maamulka gobollada dhexe +Cod
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha & Federalka Somaliya, C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa), ayaa sheegay Dowladdu inay qirsan tahay doorka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe, balse ay isku khilaafsan yihiin magaca.
Ahlu Sunada Gobolada Dhexe, ayaa horey ugu baaqday in Maamulka loo samaynaayo Gobolada Dhexe laga dhigo Maamulka Ahlu Sunna, iyagoo magacaasi u arka midka Ururka Al Shabaab looga xoreeyay Gobolka Galgaduud.
“Anaga runtii waxaan aaminsanahay shaqada aad haysaan ay shaqadii Dowladda tahay, magaca uun aan isku khilaafsanahay, marka waxaan rabnaa inaan magacii ku heshiino hadafkii weynaayow ummadaan ay laheyd lagu wada gaari karay. Hooska dowladnimadaa la wada harsan karaaye aan hooska wada qaadano.” Ayuu yiri Wasiirka.
“Culima’udiinkuna weligoodey jiri jireen, magacoodu marwalba waa jirayaa, waa jooggayaa, taas leeskuma haysto, laakiin shaqada la qabanayo iyo muuqaalkeeda waa middaas, haddii Ilaahay yiraahdo. Dadka aad u dagaalanteen ood u soo dhimateen waxay u baahan yihiin horumar, nolol iyo Maamul.” Ayuu Yiri Wasiir Odawaa.
Wasiirka, ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu soo dhaweeyay oo gelinkii dambe ee shalay lagu qabtay Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud.
Wasiir Odawaa, ayaa wada hadalo Magaalada Dhuusamareeb kula leh Madaxda Ahlu Sunna, si Ahlu Sunna kaga qayb qaadato Dhismaha Maamulka Gobolada Dhexe.